Tiknooloojiyada toonta beerto xilliga jiilaalka
Garlic waa warshad dilka ah. Haddii aad go'aansato in ay koraan toonta jiilaalka, waxa fiican inaad ka taxadartid arrintan dayrta. Markaad beeratay geedka buuggan jiilaalka, sanadka soo socda waxaad heli doontaa toonta tayada iyo tayada aad u fiican. Ma taqaanaa? Garlic wuxuu helay sumcad ballaaran oo uu leeyahay in ka badan 70 nooc.
Waxyeellada tufaaxa jirka jidhka
Xaqiiqdii qof kasta oo ka yimi carruurnimada waa ogyahay in toontu ay tahay dhakhtarka aan loo baahnayn, gaar ahaan jiilaalka. Ka dib dhan, waa waqtigan in difaaca qofku yahay mid aad u tabar daran. Sidaa darteed, qof walba waxaa lagula talinayaa inuu isticmaalo toonta si looga hortago. Laakiin qofna malaha in waxyeellada laga yaabo in toonta ay sidoo kale noqon karto mid muhiim ah. Ugu yaraan saboolka ugu weyn ee toonta ayaa loo sababeyn karaa urkooda.
Dareenka ugu horreeya xitaa marka la xuso toonta ayaa ah urta (laga soo bilaabo xeryahooda sulfuric). Dadka qaarkiis way jecel yihiin, qaarna maaha. Laakiin urta toonta waa wax shakhsi ah, laakiin faa'iidada toonta (qiimaha) waa wax muuqda oo ujeeddooyin ah. Bal aynu eegno xaqiiqadani aragti kala duwan. Qiimaha nafaqada ee toonta Miiskeena, toonta wuxuu ku jiraa saddex nooc: cusub, oo ah budo, iyo waliba baalal cagaaran.
Garlic waa lagama maarmaan u ah suxuuno badan oo noo yaqaanno, marinades, iyo caano, sidoo kale waxay u isticmaalaan daaweynta iyo ka hortagga hargabka xilliyeed. Waxaa sidoo kale jira cuntooyin badan oo daawooyinka dhaqameedka ah si loo hagaajiyo difaaca, hagaajinta shaqada wadnaha, nadiifinta iyo dib u soo kabashada jidhka. Uma xumaynin ujeedooyinkaas oo dhan si ay u koraan sariirtaada, oo aadan iibsan toon.
Meelaha laamood ee jiilaalka, sida loo kaydiyo toonta xilliga jiilaalka
Si aan caadi ahayn ujuurada iyo gubashada, oo ku dheelaya caraf udgoon iyo dhadhan gaar ah - kuwani waa calaamada ugu haboon ee lagu caddeeyo toonta. Waxaad kugula wareegi kartaa badeecadani gebi ahaanba guriga dhexdiisa, labadaba cusub iyo qayb ka mid ah jawi kala duwan, dhaymo iyo banaanado. Caan ka noqo toonta waa wax aan lagala tashan karin, taas oo ah sababta dadka degan xagaaga oo idil ma doonayaan oo kaliya in ay beeraan dalaggiisa, laakiin sidoo kale in la sameeyo goosashada xilliga qaboobaha, marka toonta cusub ay noqoto mid sax ah.
Doorashooyinka ugu wanaagsan ee la goosan karo toonta cagaaran xilliga jiilaalka
Maanta, haween khibrad leh ayaa la yimid siyaabo badan oo badan oo lagu kaydiyo khudaarta xilliga qaboobaha. Oo toonta ma jirin, sababtoo ah toonta la qaboojiyey waxay haysaa dhammaan hantidooda faa'iido leh, dhadhankiisa iyo dhadhanka. Ku kaydi qaybta qaboojiyaha qaboojiyaha. In this article waxaan ku sharrixi doonaa sida loo iibsado toonta cagaaran ee xilliga qaboobaha.
Qaar badan oo naga mid ah waxay u isticmaalaan toonta cuntada ama xitaa daawooyinka, laakiin wax yar baa ogaanaya nooca dhaqanka ee botanical. Waxaa iska leh dhirta cagaarka ah ee reerka Onion, bannaanka u badan ee marxaladaha hore ee kobcitaanka toon ah si fudud u wareersan karaa caws iyo ka saari sariiraha, taas oo ka dhinno naftooda ah suurtagalnimada bixinta fitamiino.
Waa maxay sababta toonka jiilaalka u noqdaan jaalaha guga iyo waxa la sameeyo
Guga oo ku yaal goobta, dad badan oo xagaa xagaaga ah oo xanaaqsan waxay ka helayaan caleemaha yellowed ee beeritaanka toonta. Oo tani ma aha oo kaliya saameyn xun, laakiin sidoo kale calaamad ah in technology tekni ah ee toon jiilaalka sii kordhaya. Ka dib oo dhan, ka dib hurdi caleenta ah, geedka joogsadaa oo dhan wada koraya, iyo toon ah oo qudhuntay. Maxay tahay sababta toon jiilaalka u noqdaan huruud guga iyo waxa la sameeyo, waxaan ka fiirsanaynaa maqaalkan.
Sida loo siiyo qudaarta iyo basasha leh ammonia
Waxaan caadeysnaa inaan ka fakarno ammonia, oo ah daroogo loo isticmaalo in lagu soo noolaado qof suuxsan oo lagu daaweynayo neuralgia, myositis, iyo matagidda mataga. Laakiin waxaa soo baxday in isticmaalka ammonia ee beerta waa suurto gal ah - gaar ahaan, waraabiyo iyo buufin dalagyada bulaacada: toon iyo basasha.
Waa maxay nooca toonta la beeray ka hor xilliga qaboobaha: noocyo sare
Garlic waa geedka qoyska reer Amarallis. Tani waa mid ka mid ah dalagyada khudradda ugu caansan dunida oo dhan. Waxaa loo isticmaalaa sida wax lagu daro cuntada iyo daawooyinka. Sanad walba, in ka badan 17 milyan oo ton oo toon ah ayaa laga goostay adduunka. Khudraddaas waxaa la abuuri karaa wakhti kasta sanadka. In this article waxaan u falanqeyn doonaa si faahfaahsan dhammaan noocyada caanka ah iyo ugu wanaagsan ee toon jiilaalka (sawirro).
Noocyo kala duwan oo ah toonta guga loogu talagalay qaybta dhexe
Maqaalkani wuxuu faa'iido u yeelan doonaa kuwa masruufka ah ee toonta iyo doonaya inay soo baxaan warshad waxtar leh oo beertiisa ah. In aad ka heli doontaa liiska noocyada ugu caansan ee toon guga leh sawir iyo sharaxaad kaa caawin doona inaad go'aamiso nooca warshadda ku haboon aad.
Garlic waa marti joogta ah miiska, gaar ahaan xilliga dayrta-qaboobaha. Haysashada dhadhan jilicsan iyo ur adag, toonta ayaa ah qayb muhiim ah ee suxuunta hilibka, suugada iyo saladhyada. Garlic waa jiilaalka iyo guga. Waa mid aad u fudud in la kala saaro noocyadan kala duwan - waxaa jira 5-6 oo toon ah madaxa madaxa jiilaalka, iyo bartamana waxaa jira stem been ah, madaxa madaxa guga waxaa jira xumbo badan (10-20 gogo '), ma jirto asliga ah been ah.
Sida loo dhigo toonta xilliga jiilaalka
Bannaanka u badan u koraan toonta aagga, iyo marka goosashada timaado, su'aasha waxay ka timaadaa kaydinta. Maqaalkeena waxaan kuu sharxi doonaa sida loo dhigo toonta xilliga qaboobaha ee guriga si aaney u qalalayn, tixgelin siyaabaha kala duwan ee loo kaydiyo. Goynta Goynta for goosashada ee jiilaalka waa in la fuliyaa muddo cayiman.
Sidee loo kariyaa toonta iyo hadba jeer?
Bannaanka u khibrad leh waa ogtahay: haddii aad si sax ah u abaabuleysid waraabinta saxda ah ee beertaada, waxaad ma badbaadin kartaa cagaarka iyo miraha koraya ee dhibaatooyin badan, laakiin sidoo kale waxay si weyn u kordhineysaa qiyaasta goosashada mustaqbalka. Maanta waxaan ka hadli doonaa dhaqanka taas oo ka dhigaysa dalbashada qoyaan, taas oo dabiicigu uu leeyahay qaabdhismeedka xididada daciifka ah wuxuuna u baahan yahay waraabin badan inta lagu jiro mudada gaar ah ee horumarinteeda.
Garlic waxaa loo yaqaan in badan oo ah sida dhir udgoon iyo dhir dabacsan, siinaya saxanka dhadhan gaar ah iyo urta. Wuxuu caan ku yahay hantidiisa daawada waxaana si aad ah loogu isticmaalaa daawada dhaqanka. Pythagoras waxay ku magacawday "Boqorka Beerta", oo wuxuu ku dhajiyay guriga isaga oo ilaalinaya jinniyadooda iyo jinniyadooda sharka ah. Legends badan oo ku saabsan warshad this yaab leh iyo sifooyinka iyo bogsashada guryaha.
Garlic wakhti dheer ayuu si fiican u dhistay sida qayb ka mid ah xiisaha badan ee cunnooyinka culus ee xafladaha dalalkeena. Laakiin dad yar ayaa og in nooca faa'iido leh iyo waxyeelada waxyeellada qoyan ee qashinka lagu shiiday. Bal aynu eegno arinkan. Sallal duban: muuqaal iyo dhadhan .
Garlic "Lyubasha": muuqaalada kala duwan iyo beerashada
Bannaanka u badan door bidaan noocyo xilliga qaboobaha ee toon. Ka dib oo dhan, waxay yihiin waqti hore, marka laga reebo waxay bixiyaan goosashada badan. Ka mid ah noocyada kuwaas si wanaagsan u kala soocay toonta "Lyubasha", kaas oo leh faa'iidooyin badan, taas oo ah sababta uu isagu hogaaminayo hogaanka bannaanka u. Qeexitaan kala duwan "Lyubasha" - Ukreynta ukunta, laakiin waxay ku habboon tahay beerashada ma aha oo kaliya Ukraine, laakiin sidoo kale Russia, Belarus, Moldova.
Ukrayna waxay jecel yihiin toon. Waxay ku daraan suxuunta badan, diyaarinta jiilaalka, cun cun sonkor leh borscht. Waxa kale oo loo isticmaalaa ka hortagga iyo daaweynta hargabka iyo cudurada viral. Sidaa darteed, waxay ku koraan qiyaastii guri kasta. Ka fikir talooyin waxtar leh oo ku saabsan sida loo abuuro toonta jiilaalka.